October 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
6:26:00 AM movie No comments
ဒီဇာတ်ကား ကတော့ လက်ရှိနာမည် ကြီးဆဲပါပဲ..။
ဇတ်ညွန်းတော့ မရေးတော့ပါဘူး..အောက်မှာ Official Trailer လေးမြည်းစမ်းကြည့်ပြီး
4:49:00 AM software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာထဲက file တွေ folder တွေ drive တွေကို
အခြားသူတွေ ကြည့်လို့ မရအောင် password ပေးပြီး
License version လေးအဖြစ်သုံးနိုင်အောင် License key ပါထည့်ပေးထားပါတယ်..။
သုံးကြည့် ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
Advanced SystemCare. Pro 7
5:49:00 PM software No comments
Advanced SystemCare. Pro7..
ဒါလေးကတော့ သုံးဖူးသူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ်..။ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ junk file တွေကိုရှင်းလင်းပေးတာ စက်ကိုလေးလံစေတဲ့ Malwere တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာ registry တွေကို repair လုပ်ပေးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာ ပေါ့ပါးသွက်လက်စေဖို့ RAM ကို released လုပ်ပေးတာအပါအ၀င် ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ software လေးဖြစ်တာမို့ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့် တယ်ထင်ပါတယ်..။mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.။ pro version လေးဖြစ်ဖို့ license key လေးပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်...
8:46:00 AM movie No comments
အောက်မှာ Official Trailer လေးမြည်းစမ်းကြည့်ပါ..။
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် The Man with the Iron Fists (2012)
Full movie ကို ဒီကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
kill bill vol2Full movie
9:47:00 PM movie No comments
kill bill ဇတ်ကားရဲ့ အဆက်
((ဆူးခင်းလမ်းသုတ ရသ)) က ကျနော်မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
အောက်မှာ Kill Bill Volume 2- Official Trailer လေးကို ဒီမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်
Kill Bill Volume Full movie ကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
7:11:00 AM movie No comments
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ တုန်းက အလွန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ..။
((ဆူးခင်းလမ်းသုတ ရသ)) က ကျနော်မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
အောက်မှာ Kill Bill Volume 1 - Official Trailer လေးတင်ပေးထားပါတယ် နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်
Kill Bill Volume 1 Full movie ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
9:39:00 PM software No comments
IDM 6.18Build4ပါ.. ။ ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင် patch ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ..။ patch အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ.။
Internet Download Manager 6.18 Build 4ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
8:56:00 AM software No comments
ဒီ ဆော့ဝဲကတော့ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ သူ့ကို သုံးပြီး windows os အမျိုးမျိုးကို မောင်းနှင်အသုံးပြု နိုင်သလို အခြား virtual machines created အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်တာတွေ အများအပြားပါပဲ..။ သူ့မှာပါဝင် တဲ့
32- and 64-bit host and guest operating system support. Runawide variety of virtual machines containing 32- and 64-bit operating systems simultaneously on the same physical PC. Co mpatible 64-bit guest operating systems include select Microsoft Windows, Red Hat, SUSE, and FreeBSD distributions.
လိုအပ်ရင် VMware Player 6.0.1 Full version လေးကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
6:16:00 AM movie No comments
ဒီpages က ကျနော့် မိတ်ဆွေက ရုပ်ရှင်ကား ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးပါဆိုလို့
R.I.P.D. (2013) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်
အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ ကားပါပဲ..။အောက်မှာ Official Trailer လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အကြိုက်တွေ့တယ်ဆိုရင် R.I.P.D. (2013) Full Movie ကို
CCleaner Professional & Bussiness Edition 4.07
5:59:00 AM software No comments
Cracker အသုံးပြုနည်းကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ..။
CCleaner Professional & Bussiness Edition 4.07 ကိုတော့ ဒီမှာ
Watch Young Detective Dee- Rise of the Sea Dragon
6:48:00 AM movie No comments
အခုတလော ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ပဲ ကြည့်ဖြစ်နေတယ်..။
ကိုယ်ကောင်းတယ်ထင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ တွေ့ရင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကို လည်းကြည့်စေချင်တဲ့ စိတ်က အလိုလိုတတ်လာပြန်ပါတယ်..။ ဒါလည်း လောကနီတိ အလိုအရပဲ လို့ ဆိုရမယ်ထင်တယ်..။
အခုလည်း Watch Young Detective Dee- Rise of the Sea Dragon ဒီကားလေးကို ကြည့်ရတော့ ကျနော်မိတ်ဆွေတွေကို ကြည့်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
သူရဲ့ fficial Trailer ကို မြည်းစမ်းကြည့်ရအောင် အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်..။
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Watch Young Detective Dee- Rise of the Sea Dragon
Full movie ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..။
DVD Photo Slideshow 8.8
2:23:00 AM software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို သီချင်းလေးတွေ ထည့်ပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် လုပ်ပေးမဲ့ software လေးပါ..။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင် ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်
Pro version လေးဖြစ်အောင် လိုင်စင်ကီးလေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..
IObit driver Booster V1.0 Pro
1:59:00 AM software No comments
IObit driver Booster Pro version လေးပါ..။အရင်က Beta version တွေတင်ပေးဖူးပါတယ်..။အခု Pro version လေးတွေ့လို့ ထက်တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
Driver နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။
Tweaking Windows Repair 2.0.1
8:15:00 AM software No comments
သူကတော့ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့အတိုင်း windows တင်ပြီးကာစမှာ သွက်လက်နေပေမဲ့ အသုံးပြုလာတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ စက်က အရင်လို မသွက်တော့သလို
ဟို error တက်လိုက် ဒီ error တတ်လိုက်နဲ့ windows အသစ်ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်အောင် ပြသနာတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေရပါတော့တယ်..။ ဒီကောင်လေးကတော့ အဲဒီပြသနာတွေကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်..။
သူရဲ့ အသုံးပြုနည်း Video လည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
Tweaking Windows Repair 2.0.1 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
7:28:00 AM Android No comments
UnlockRoot PRO 4.11 ဒီကောင်လေးကတော့ လူသိတော်တော်များပါလိမ့်မယ်..။ Android ဖုန်းတော်တော်များကို ဒီကောင်လေးနဲ့ click တချက်လောက် နှိပ်ပြီး Root လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
သူ့ရဲ့ Product Features တွေကတော့
သူရဲ့ မူရင်း ဆိုဒ်မှာ လေ့လာချင်ရင် ဒီကနေ သွားကြည့်လိုက်ပါ..။
Pro version လေးဖြစ်အောင် Serial key တွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်..
UnlockRoot PRO 4.11 ကို လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
7:53:00 AM software No comments
IDM 6.18Build2ပါ.. ။ ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
အလည်လာတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ..ပြီးရင် patch ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ..။ patch အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ.။
Internet Download Manager 6.18 Build 2ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
4:41:00 AM software No comments
ညီလေးတယောက်တောင်းထားတာရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အခုလက်ရှိ CorelDRAWGraphicsSuiteX6 အထိ ထွက်ထားပါတယ်..။ ကျနော့်မှာ အဆင့်သင့်ရှိနေတာက CorelDRAWGraphicsSuiteX4 ဖြစ်နေတာရယ် သူကိုလေ့လာဖို့ စာအုပ်ကလည်း CorelDRAWGraphicsSuiteX4 အတွက် ရေးထားတာဖြစ်နေတာမို့ CorelDRAWGraphicsSuiteX4 ပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Configure and set up the menus, palettes, and dockers to suit your personal needs
Import, edit, and retouch photos and use Corel® PHOTO-PAINT™ X4 for advanced editing
Ensure what you design will print accurately by mastering CorelDRAW’s advanced output features တို့ပါပဲ..။
full version လေးဖြစ်အောင် copy to ဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲက dll files ၃ ခုကို copy ကူးပြီး (C:\_Program Files\_Corel\_CorelDRAW Graphics Suite X4\_Programs) မှာ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ..။ သူကို အသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူအောင် ဆရာ သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ပြုစုတဲ့ CorelDRAWGraphicsSuiteX4 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါ တွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
လိုချင်ရင် CorelDRAWGraphicsSuiteX4 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 အသုံးပြူနည်း စာအုပ်ကိုတော့ ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
85 Top Paid Android Apps & Themes Pack 5/10/2013
7:25:00 PM Android No comments
100 Top Paid Android Apps & Themes Pack ကိုတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..။
download Link က Expire ဖြစ်သွားလို့ အခု 85 Top Paid Android Apps & Themes Pack 5/10/2013 ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
သူမှာဘာတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာတော့ ရေးပြစရာ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ် Top ဆိုတော့ Top ဖြစ်နေတာတွေ ဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ..။
Android သမားတွေအတွက် သေချာပေါက် အသုံးဝင်မှာပါ..။
ပိုက်ဆံပေးမှ ရမဲ့ Apk တွေကိုလည်း ဒီထဲမှာ free ရနိုင်ပါတယ်..။
လိုချင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
5:45:00 PM windows No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ Android version of XP ပါ..။
1 - December Updates
2 - plug all the security loopholes
3 - faded all the mistakes Mac version
4 - can be installed version of Flash Memory (Firmware)
5 - Video ad hoc basis was developed for those who do not know how to develop the copy on the And annotated in the program ROM with video CD.
6 - put the latest programs such as WMP11 and IE8
7 - were merged more than5Thmthat the only Android + Theme Win8
(Non-theme Sifn and Aldark)
8 - has been added to simulate the entire program for IPad
9 - has been added to Android Cleaner file isafile from the artificial device to accelerate
90% of the file deletes unused cookies, and other
Harmful files and causing slow device.
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (650MB) ရှိပါတယ်..။
original windows လေးဖြစ်အောင် ကီးဖိုင်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်..။
6:03:00 AM software No comments
နောက်ဆုံးထွက် IDM 6.18Build 1 ပါ.. ။ ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.18 Build 1 ကိုဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။